QARAN-DIIDKA MUQDISHO OO WAJIGIISII RUNTA AHAA LA SOO BAXAY!!-2-
1- HAWIYE OO DHAN MA MOORYAAN BAA?
2- MASE KU GUULAYSAN KARAAN FASHALINTA DAWLADDA KMG AH??
Qurmadii hore waxaan ku soo qaaday marxaladihii kala duwanaa ee ay soo mareen qaran-diika Muqdisho. Laga soo billaabo horraantii 1992dii ilaa iyo waqtigan la joogo. Waxaan soo xusay in asaasayaashii USCda 1990 kii oo ahaa odayaal aqoon-yahanno ah kana soo qayb-qaatay halgankii gobonima-ddoonka dha-dhamiyayna macaanka qaranimo-in aysan marna ka maqnayn qurshaha ODAYAASHAAS dawladd iyo qaranimo buuda ee dalka ku waaro maamulkiisana loo TARTAMO.
Waxaan soo xusay sida awooddii iyo hoggaankii ururku ugu gacan-galay kooxo wax-ma-garato ah oo ka leexiyay ururka qorshihii odayaashii asaasayaasha ahaa. Kooxahaas oo ku caan-baxay magaca: MOORYAAN.
Waxaan soo dulmaray maxaladihii kala duwanaa ee maamulka mooryaanta soo maray 17kii sano ee la soo dhaafay. Waxaan soo guud �maray sida ay siyaasaddooda rukun uga dhigay burburinta dalka gaar ahaaan Muqdisho, dagaallada joogto ah, diidmada dhisma dawladeed iyo soo celin qaran.
Waxaan sheegay in kooxahaas marxaladahaas marba magac iyo midabb la soo baxayeen si ay ugu moodaan waqti mucyan ah. Dhamaadkii qormada waxaan Sheegay in maanta ay la soo baxeen wajigoodii runta ahaa iyaga isku soo bandhigay MAGACA-HAWIYE.
KOOXANI WAA RUNTOOD OO HAWIYE WAY YIHIIN WAASE HAWIYA-HEE?? Waxaan ugu danbayntii soo jeediyay laba su�aal oo kala ah :
1- Hawiye oo dhan ma moorryaan baa? Iyo:
2- Dagaalka qaran-diidku maanta ka wadaan Muqdisho ma ku guulaysan karaa in ku fashaliyaanDKM ah sidii ay kuwii hore ugu fashaliyeen??
Qormadeenna maanta waxaan kaga jawaabayaa labadaas su�aalood. Waana tan:
1-HAWIYE OO DHAN MA MOORYAAN BAA ?
Waxaan filayaa in qaar badan aysan u cuntamaynin in la iswaydiiyo ama lagu fikiro su�aal noocaan ah oo ay u qaadan karaanba in ay tahay midd meel-ka-dhac ah oo aan hobboonayn. jawaabtooduna waa midd gegdeg ah oo MAYA ah.
Waxaa jira qaar kale oo iyaga oon kaba fiirsanin soo tuuraya jawaab degdeg ah oo HA ah.
Haddaan ka indha-laabto labadaas nooc ee caddifaddu ka qaalib noqotay oo aan u soo noqdo jawaabta xaqa ah waxaan leeyahay: qabaa�ilku waxay la mid yihiin shucuubta. Waxaa ka soo askunta ummadda oo iyadu ah qabaa�il isu tegay oo sida qaalibka ah ku midoobay waxyaalo ay ku jiraan Af, dhaqan, taariikh iyo Dhul degaan u ah..iwm..
Umadaha Dunida hadddii loo dhabba-galo waxaa laga helayaa dadkooda noocyo kala duwan.
Bulsho meel ku dhaqan waxay leedahay kwo khayrka u taaggan iyo kuwo sharka u taagan, Qaar cilmi kasbaday iyo kuwo ka maran . kuwo reer magaal ah iyo qaar reer miye ama beeralay ah. Mal-qabeen iyo dibb-jir.
Qabiillada Somalidu waa bulshooyin yar�yar oo midd kasta ka koobantahay noocyada kala jaadka ah ee dadka . Reer kasta waxaa jira kii wanaagsanaa iyo kii xumaa. Ma jiro reer wada fican sida aysan u jirin reer wada xun. Tani waa xaqiiqo aan labo isku-diidiinin.
Somaalidu Ummad ahaan waxaa lagu tilmaamaa in yihiin Reer-guuraa marba meel ula guura xoolahooda. Culimada cilmiga bulshada waxay ku sifeeyaan reer-guuraga-xoola-raacatada ah in ay yihiin kuwa ugu hooseeya Aadamaha maanta ku nool Arlada korkeeda. Sababta oo ah waxay ka qadeen oo aan gaarin weli Xadaaraddii, Aqoontii iyo Ilbaxnimadii banii-Aadamku soo dhisay taariikhdii dheerayd ee uu soo jiray
Dib-u-dhacani waa mid ay wadaagaan Qabaa�ilka Somalidu badankood. Waxa la ogyahay in JINSIGA Somali macnaheedu ka turjumayo reer baddiye xoolo raacata ah. Inta yar ee ah reer magaalka sida reer Xamar, Marka. Baraawe, Kismayo.. waa dad asal ahaan ka soo jeeda Xagga Aasia waliba Carabia iyo Persia. Waxaana la mid ah inta yar ee beeralayda ah oo iyaguna ka soo jeeda xagga Afrikada shishe siiba kuwa qota agagaarka wabiyada.
Su�asho waxay tahay haddaba maxaa sababay in Muqdisho iyo dagaannada kale ee Hawiyaha 17 ka sano looga waayay in laga sameeyo wax maamul ah nooc kastaba ha ahaado eh xataa dawladd hoose oo magaalo haddii la awoodi-waayay mid gobol iyo mid qaran? Maadaama Reer baadiyihii Hargaysa iyo Garoowe-oo weli HILIB-GEELA laga quuto- ay ku guulaysteen in ay dhisaan maamullo noocaas ah ? Hawiye oo waliba nasiib u helay in ay daris la noqdaan Muqdisho oo Caasimad u ahayd dalka in ka badan 100 sano?
Jawabta waxaan ku soo ishaaray qormadii hore. Waxayna ku soo ururaysaa in 1992kii Jabahaddii USC da ee Hawiye ay awoodeedii iyo hogaankeediiba uu gacanta u gelay kooxo WAX-MA-GARADD ah oo la Magac baxay Mooryaan.
Waxaan cidina inkiri karin in qabiil walba uu leeyahy Mooryaantiisa. Waqooyi waxaa loogu yeeraa DAYDDAY. Barina waxaa loo yaqaannaa JIRRI. Waxaase la wada ogyahay in daydayga iyo jirridu aysan marna u suural gelin in ay dadwaynaha waqooyi iyo kuwa bari ku muquuniyaan xoogg oo ay gacanta ku dhigaan aayahooda . Dadka shar-wadeenka ah dalka oo dhan way joogaan dhibna way ka soo gaartaa dadka iyo dalkaba waxaase yuraya inta sama-wadayaasha ah ee ka tiro badan.
Haddaan sii qeexo Hawiye intiisiisii xumayd ee shar-wadeenka ahayd ayaa qabsatay oo ka awood roonaatay intii wanaagsanaydd ee khayr-wadeenka ahayd.
Muqdidho markii USCdu ka saartay M. S. Barre waxaa laga sifeeyay wixii aan Hawiye ahayn. Aqoonyahanno Hawiye ah oo qurbaha ku noolaa ayaa Xamar ku soo qulqulay waqtigii ay ka cararayeen aqoonyahannadii dadka kale. Markiise USC dhexdeeda ka qarxeen dagaalladu Aqoonyahannadii Hawiye waxaa laga waraabiyay isla weelkii walaalahoodii kale laga waraabiyay. Waxaana ku habsaday dhibaato wayn.
Bartamihii 1992 ayay wax-gardkii., aqoonyahankii, maal-qabeenkii iyo intii awoodi kartay ee Hawiye ahayd iyaguna Muqdisho ka qaxeen markii qaar la-laayay qaarna la dhacay waxaayna ka dabatageen Somali-wayntii ka horaysay. Qaxa Hawiye waa kan ugu badan 10 sano ee la soo dhaafay welina socda
Sidaas ayay taladii Muqdisho gaar ahaan iyo tii Hawiye guud ahaan ugu kaliyaysateen kooxihii wax-ma-garato ahaa oo koox kasta waxaa hoggaamiye u noqday DIRAWAL iyo ASKARI DABLE oo kaashanaya ganacsato cusub oo ka maalystay boolida Dalka iyo Dadka waxayna samysteen Maxkamadu ku sheeg ay ku ilaashadaan danahooda.
Muqdisho taladeeda iyo tan Hawiyeba waxay maroorsaday 17 sano is-bahaysi-shareed oo af-duubay dad-waynihii iyo aayatiinkooddiiba. Waxaa Xamar qafaashay kooxo isgu jiraan mooryaan hubaysan, gancsato-xaaraan iyo wadaad-xume kitaabb-gaab ah oo dhammaantood wax ku noqdeen xaaladda qaran-jabka kuna helay awood, magac iyo maal BURBURKA DALKA, DADKA iyo DIINTA.
Kooxahaan oo qaba aragtiyo is-khilaafsan waxa kaliya ee ay ka midaysan yihiin waa: IN LAA DAGAALLAMO YAGLEEL DAWLADEED IYO SOO NOOLAYN QARAN. Taas oo ay u arkaan in ay wiiqayso awooddooda iyo danahooda.
Xoogaggaan qaran-diidka ah waxay la soo dagaallamayn soona fashaliyeen dawladihii Cali mahdi, Caydiid iyo Cabdiqaasim. Maantana waxay u dagaallamayaan in ay DKMG ah marsiiyaan waddadii ay kuwii ka horeeyay marsiiyeen . Tanna waxay inno dhiibaysa Su�aasha labaadd ee ah:
2- QARANDIIDKA MUQDISHO MA FASHALIN KARAAN DKMG ah ?
Waxaan aan af-buuxa ku oran kara jawaabta oo koobani WAA MAYA. Waana tan:
Qof kasta oo fikradd ka haysta cilmagia la yiraaho :CALAAQAADKA DAWLIGA AH ( International relations ) waxaa si caddaan ah ugu muuqanaysa is-beddalka asaasiga ah ee ku soo kordhay XAALADD-SOMALIDA maanta . Is-beddlkaani wuxuu saameeyay arimaha gudaha ee dalka, kuwo gobolka iyo kuwa caalamiga ah. Wana is-beddel buuxa oo wata awoodihiisa SIYAASDEED, DHAQAALE iyo MILITARI,
Si ay u sahlanaato fahamka duruufaha cusubb ee ku soo beerya XAALAAD-SOMLIDA ayaan halkaan idiin ku qodabaynayaa Cawaamilka ka dhanka ah siyaasadihii mooryaanta QARAN-DIIDKA ah ee 17 sano Muqdisho ugu haystay af-dduubka shacbigeedana iyo kan Hawiye guud ahaan ka dhigtay LA-HAYSTAHA U GURBA-DUUBAN KOOXAHAAS danaysta yaasha ah.
Qodobada soo soda ayaan ku qeexyaa is-bedallada waayaha ee ku yimidd arimaha dalka ee ay nasiibka u yeelatay DKMG ahi in ay waqtigaan ku soo beeganto. Waana tan:
1- DAWLADD LOO DHAN-YAHAY:
Markii ugu horraysay muddadaa-burburka ayay Somali Caallmku ugu qabtay Kenya shir-wayne socday in ka badan laba sano. Waxyna ku HESHIISAY :
A- Hab awood-qaybsi oo ku salysan ( 4.5 ) oo aan qolana ka maqnayn..lama oran karo waa nidaam xaqa-soor ah oo xaqiijiyay caddaaladd buuxdaa. laakiin sidii CARTA looga dhawaaqay waxaa la biday XAL
B- Waxaa la meel-mariyay CAHDI-QARAMEED ama DASTUUR lagu dhaqmayo muddada kala-guurka oo shan sano ah.
C- Waxaa la doortay BARLAMAAN, Madax-wayne iyo Xukuumadd ku meel gaarka oo dibb-u-soo yagleesha QARANIMADII Dalka iyo xasilloonidiisii.
2- DAWLADD SHARCI AH :
Waxaa la dhisay Dawladd shaci ah oo la yiraaho:DKMG ah.
Sharciyadda DKMG ah waxay ku dhisantahay aqoonsiga gudaha ee qabaa�ilka Somalida iyo aqoonsiga dibadda ee bulshada caalamka. Sharciyaddu waa saldhigga jiritaanka dawladeed. Waana midda ka maqan maanka iyo maskaxda Somalida.
Haddaan la haysan shaciyadd xoog kasta oo ay yeelato kooxi iyo dhulka kasta ay qabsato qiimo uma yeelaan oo
Waxay weligeed ahayanaysaa koox BUDH-CADD ah sidii QAB-QABLAYAASHII IYO MAXKAMADIHII ku dhacday. maadaama aan cidina soo dooran ee iyagu is-magacaabeen. Maddadii qaran-jabka lagu jiray wixii dawladu la dhisyay midina cawo iyo ayaan u ma yeelan in ay ku guulaysato kasbashada shaciyadda gudaha iyo dibadda.
3. TAAGERADA CAALAMKA:
Dawladda KMG ah waxay maanta haysataa Taageerada Caalamka. Sida tan dalalka DERISKA ah ee IGAD, tan qaaradda ee African-Union iyo tan caalamka ee UN ka. Taageerayaanshaan waxaa ku jira dalalka ugu awood-wayne adduunka oo ay ka midd yihiin USA iyo Midawga-Europ oo ah dalalka go�aamiyaa arimaha Caalamka Alle-wayne ka sakaw.
Ta�yiidkani wuxuu isgu jiraa dhinacyada Siyaasadd, Dhaqaalaha, Bulshada iyo Militariga.. Tanna waa guul aan u soo hoyanin Xukuumadihii tan ka horeeyay.
4- CIIDAMADA AJNABIGA AH:
Waxaa Muqdisho ku sugan maanta Ciidamo qaran oo ah kuwa Itoopia oo ah SUPER-PAWERKA AFRIKA. Qabiil kasta oo Somaliyeed iyo hadday isu tagaan Qabaa�ilka Somalidu oo dhan ayna suura-gal u ahayn in ay waajahaan ciiiidanka Qaran ee Afrika ugu awood-wayn. Waxaa kale oo iyana jooga ciidamo qaran oo ka tirsan Afrikaan-Union iyo UNka oo dhowaan la filayo.
Ciidamadaan dibadda waxaa garrabb socda Ciidan-qaran oo Somali ah oo ay soo koraya tiro iyo tayo mustaqbalka.
5- SOMALIDA OO DAASHAY:
Dadka Somaliyeed waxaa ku dhacay dhibaato aan lagu arkin taariikhda Aadamaha. Qraranimadu waa NICMO iyo DEEQ Alle bixiyo. Dadyaw ayaa halggan iyo dagaal ugu jira in ka badab 100 sano sida Kurdiga iyo Falastiin welina aan soo xasilinin..
Somali oo qaran ahayd 30 sano ayaa iyada oon dibadda looga soo duulin iskeed ku baabbi�isay qarankeedii. Markaas ayay adduunka afartiisa jiho u kala firxatay. Taas oo keentay in dunadu sanka-ka-qasato oo caalamka laga naco. Waxaa ku HABSADAY DULLI IYO CEEB kuwa dibadda u cararay iyo dalka ku caddibanba.
Somali waxaa maaanta ka dhamaaday sabirkii iyo adkaysigii. Waxaana ka soo haray inay sacabbada kor u taagayso : ILAAHAYAW MAR NOO SOO CELI QARAN. QARAN. QARAN. Eebbe waa deeqsi iyo Dulqaad-wayne oo kuwa sacabbada kor loo taago ma qadiyo.
Haddaba marka aad isu geeyso qoddobada aan soo taxay
Waxaa ciddii CAQLI-FAYAW Alle ugu dheeqay sida cadceedda ugu muuqanaysa in uu dhamaaday waqtigii ay Muqdisho af-duubka ugu jirtay wax-ma garadkii USCda ee maroorsaday awooddii iyo hoggaankii Ururka 1992..
Waxaa la gaaray waqtigii: MUQDISHO, HAWIYE IYO SOMALIBA KA XUROOBI LAHAYD MOORYAANTA MAGACYADA BADAN EE QARAN-DUMISKA QARAN-DIIDKA AH. Ee magacii Muqdisho, kii Hawie, kii Somali, kii Afrika, kii Islaamka iyo kii Aadamaha ceebta u soo jiiday.
Ummadda Somalia waxaa ku habsatay MUSIIBO dulsaarayd 17 sano. Musiibadaas waxaan ku matali karna ABEESO-WEEN oo Muqdisho gudd u tahay. Maanta waxaa la galay guddkii abeesada madaxeediina waa la burburiyay.Waxaa jiri doona sidaan filayo lafihii-Abeesa oo meela badan daadsan in marar dad-afraad ihi ku turunturroon karaan. Qaranse waa hangaraarac oo lugg uma dhutiyo.
Somalia waxaa u beryay waa cusub oo looga mayrayo xumaatada lagu macneeyay magaceeda LOONA SOO NOOLAYNAYO QARANIMADEEDII, SHARAFTEEDII NABADDEEDII IYO MIDD-NIMADEEDDBA
Waa : Dr. Maxamedd X. Said. Al-Jabarti.
Qoraalkii Hore ee Dr. Maxamed X. Saciid